Maxamed Saalax oo bar bareeyey rikoorkii Rush – Gool FM
Maxamed Saalax oo bar bareeyey rikoorkii Rush
(Liverpool) 17 Dis 2017. Maxamed Saalax waxa uu ahaa mid aan la celin Karin tan iyo markii uu yimi Anfield xagaagii hore, waxa uuna ku naaloonayaa olole gool dhalin badan sanadkiisii kowaad ee Liverpool.
Misriga waxa uu goolkiisii 20-aad dhalisay kulankii 26-aad ee uu Liverpool u dheelo ciyaartii caawa kahor qeybtii hore.
Saalax waxa uu 20 gool yeeshay kahor ciidda Chrismass-ka isaga oo 10kii kulan ee ugu dambeeyey shaqaba soo taabsiiyey 10 kubad.
Luis Suarez iyo Daniel Sturridge ayey haayeen ciyaaryahanadii ugu dambeeyey ee 20-ka gool gaara ololihii 2013-1 laakiin Saalax wali waxa uu marayaa kala barka xili ciyaareedka.
Ciyaaryahanka qura ee 20-ka gool gaaray kahor Chrismass ee Liverpool soo maray waxa uu ahaa Ian Rush xilli ciyareedkii 1986/87.
20kiisa gool waa kuwii afraad ee ugu dhakhsiya badnaa (17kii December) kaliya waxaa ku garaacay Ian Rush oo ku dhaliyey 8dii November 1986, Roger Hunt (25kii November 1961 iyo 1961 15kii December 1965).
Saalax waxa uu funaanada Liverpool ku dhaliyey 20kii gool ee ugu dhakhsiya badnaa (Kulamada oo ah 18) muddo ka badan qarni iyada oo uu George Allan ku gaaray tiradaas 19 kulan.
Daniel Sturridge waxa uu u baahday 26 kulan.
Suarez waxa ay ku qaadatay 51 kulan in uu 20-ka gool ku dhaliyo, Michael Owen 36 kulan, Robbie Fowler 36 halka Fernando Torres uu ku gaaray 31.
GOOGOOSKA: Atalanta vs SS Lazio 3-3 (Lix gool oo la iska dhaliyay)